Apple Inoburitsa Yekupedzisira Shanduro yewatchOS 2.2, ine Yakavandudzwa Mepu | IPhone nhau
Nhasi Apple yakaedza kutipa basa kune vanyori vemablog maererano nenyaya yavo. Masikati ano shanduro dzekupedzisira dzesisitimu dzayo dzese dzakaburitswa uye pakati padzo pane yekupedzisira vhezheni ye tarisai 2.2. Nehurombo kune varidzi veimwe yemawadhi akangwara paapuro yakarumwa, hatigone kuti iyi vhezheni itsva yewatchOS inouya nezvinhu zvakawanda zvitsva, kusiyana neIOS 9.3 uye tvOS 9.2 izvo zvinouya neboka rakanaka renhau dzinobatsira.
Mutsva wekutanga unouya newatchOS 2.2 ndeyekuti iyo iPhones dzinomhanya iOS 9.3 kana gare gare dzichakwanisa kubatanidzwa uye kutengeswa nemaApple Watches akawanda. Kusvikira iyi gadziriso, kana mushandisi achida kubatanidza Apple Watch yake neimwe iPhone, asati aifanirwa kuibvisa pairi kubva kwekutanga uye kuibatanidzazve neiyo nyowani, chimwe chinhu chatinga taure chaive chinhu asi chaikurumidza uye chinobatsira. Icho hachisi chinhu chitsva, asi chinogamuchirwa.
watchOS 2.2 inovandudza iyo Mepu app
Kusvikira kuburitswa kwewatchOS 2.2, patakavhura iyo Mapplication application taizoona yedu pari zvino uye taifanira kuita yakadzama yekudzvanya kuti tione sarudzo. Iye zvino iyo application inovhura yakananga kuchiratidziro nemamenu uye sarudzo nemabhatani mahombe ekuti uwane nyore. Kune rimwe divi, bhatani rakakura rekutsvaga rakaverengerwa.
Kana isu tichifunga nezvekuti inonakidza nyaya ye OS X inosvika muna Gumiguru uye kuti zvese zviri zviviri iOS 9.3 uye tvOS 9.2 inosanganisira nhau dzinobatsira, ndinofunga kuti watchOS 2.2 ndiyo yakaipisisa kugadzirisa yeavo vaburitswa nhasi kune ese mashandiro masisitimu pane apuro. Kuve mudziyo uri pasi pegore rimwe (kana vangangoita vashandisi vane iwo asingasviki mwedzi gumi nemaviri), ndinofunga kuti Apple inofanirwa kuisa mabhatiri mukuvandudza kweOSOS kana kuti inogona kuona kuti vanhu vanorasa sei kufarira mairi. Apple Tarisai. Ngatitarisirei kuti vane chimwe chinhu chiri nani chakachengeterwa mune isiri kure kure ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » watchos » Apple inoburitsa vhezheni yekupedzisira yeWOSOS 2.2, ine mamepu akavandudzwa
Ini handitombowana iyo yekuvandudza, handizive kana iri nekuti ini ndine 9.0.2 jailbreak pane yangu iPhone asi ini handiwane iyo yekuvandudza pane yangu Apple Watch. Zvimwe ndinofanira kumirira zvimwe
Pindura kuna johnattan02
Izvo chaizvo zvakafanana zvinoitika kwandiri, handifunge kuti iyo iPhone ine chekuita nazvo, asi kuti iyo yekuvandudza haizove panguva imwechete pasi rose, isu tichafanirwa kumirira.
Ivo vanofanirwa kuve nechishandiso pane ios 9.3
Zvinoita sekudaro, ndatenda nezano racho. Kune yangu chikamu, kuenda kubva kunguva 2.2 yenguva, izvozvi hazvindipe matambudziko, uye hazviunze gadziriso yakakwana kugadzirisa iyo iPhone kusvika 9.3 uye kurasikirwa neJailbreak.
Apple Inotangisa Yakavhurika Sosi YekutsvagisisaKit Companion CareKit